OF-TUULUMMAAN GARBOOMFATAA, DIDDAA SABBOONTOTAAN NI FASHALA! | QEERROO
OF-TUULUMMAAN GARBOOMFATAA, DIDDAA SABBOONTOTAAN NI FASHALA!
Posted on June 24, 2011 by Qeerroo
Qeerroo fi Deeggartoota kaayyoo Qeerroo,
Yeroo ammaa falmaa fi diddaan Qeerroo bakka adda addaatti finiinaa jira; haata’uutii, mootummaan wayyaanee karaa walqunnamtii jiran mara waan nu jalaa hidheef akka garaatti yeroon dhaamsa isaanii ergachuu hanqanne.
Ammas diddaan keenya itti fufee jira; yeroo haalli mijjatettis sagalee fi suuraa diddaa keenyaa isiniif erguuf yaalii keenya itti fufna. Diddaan Qeerroo kun erga bara 2011 keessa Yunvarsitiilee biyyatti adda addaa keessatti eegalamee kaasee finiinaa kan jiru yoo ta’u, diddaa fi fincila Qeeroo kunneen keessaa haga tokko akka armaan gadiitti isinii erginee jirra!
Yeroo ammaa kanatti karaan walqunnamtii ammayyaa haguma qajeelaa jiru, humni irreen jiraachuu filatte, Wayyaaneen karaalee qunnamtii jiran mara kiyyeessitee adamsaa jirti. Haata’uutii, kutattoonni qeerroo kiyyoo wayyaanee jiruun akka odeessi addunyaa dhaqqabu hojjachaa jiru.
Qabsoon keenya karaa maraan godhamus jabaatee kan itti fufu ta’uu asumaan hubachiifna. Yeroon kun yeroo abbootiin irree akka bara durii kaabbaa kijibaan of-dhoksanii jiraatanii miti. Qunnamtiin ammayyaa humna bilisummaa ta’aa jira. Kanneen qunnamtiin keenya kun akka milkaa’uuf nu gargaaratan marti galati keessan Bilisummaa haa ta’u!
Diddaa fi falmaan keenya haga bilisummaatti jabaatee itti fufa!!